Gypsophila paniculata: kụrụ na nlekọta, nkọwa botanical na mmepụta ihe. Na-eto eto sitere na nkpuru. Esi agba ose - Mkpụrụ ubi - 2020
Gypsophila paniculata: na-eto ma na-elekọta ụlọ
Gypsophila dreamy, ma ọ bụ swingy dreamy - a perennial ogwu sitere na ezinụlọ nke cloves. Ndị mmadụ na-akpọkarị ya ka ọ daa, n'ihi na ọganihu ifuru na-abụ bọmbụ, mgbe ọ na-etolite, akọrọ akọrọ na-apụ apụ ma ifufe na-ebu ohia na-agafe n'ọhịa. Nke a bụ otu esi agha mkpụrụ osisi. N'ihi ụdị ya mara mma, ifuru ahụ hụrụ ndị na-elekọta ubi n'anya, ha na-eji ya eme ihe. Otu esi eto osisi n'onwe gi, anyi ga agwa n'ihu.
Maka ebumnuche azụmahịa
Esi agba ume nwa
Mmeputakwa na akuku
Mkpụrụ na-emeghe n'ala
Vidio: agha gypsophila na ala oghe
Na-akwadebe maka oyi
Ifuru nke gypsophila na-etolite ohia nke nwere ogo 60-100 centimeters. Ọ nwere ike ịmalite alaka na nso ala, usoro mgbọrọgwụ siri ike banye n'ala. Akwụkwọ na-acha ọcha, dị nro na elongated, 2-7 centimeters ogologo, na 3-10 millimeters n'obosara.
Osisi nke na - eto site na ala nke steam na - ada ngwa ngwa. Obere okooko osisi na-acha ọcha na-eme ka whisk dị ọcha. Osisi ahụ na-eto eto na June-July, mkpụrụ osisi chara chara site n'August. Ha nọ na obere igbe na dayameta nke ihe dị ka abụọ millimeters.
Ị ma? Aha Latin nke genus bụ Hyphosphilus, Gypsóphila, sitere na njikọ nke okwu abụọ "gypsos" ("gypsum") na "philios" ("ịhụnanya"). E nwetara nsụgharị ederede "gypsum ịhụnanya".
Swing dreamy - steppe osisi nwa amaala na ụsọ oké osimiri Mediterranean. Na-eme na steppes, na n'ọnụ nke ọhịa pine, na ala akọrọ. Na-ahọrọ aja aja na ala ala. Uzo nke uto na-ejedebe obere ogbe uwa. Egwu nke gypsophila nwere ike itolite ma ọ bụrụ na mkpụrụ ahụ ga-eweta ifufe.
Ihe omimi nke osisi a abughi ihe omumu, ebe o na ejighi ya na ogwu. Ndị ọkà mmụta sayensị maara na Kachim nwere ọtụtụ saponins (ogige ndị na-enweghị nitrogen) na mgbọrọgwụ ya.
Na gypsophila blizzard, ọnụ ọgụgụ nke perennials na-agba oge n'oge okpomọkụ na-agụnye: pansies, astilbe, astrantia, agha, gladiolus, mmanụ ọkụ, ọlaọcha, clematis, flax-flowered flags na osisi saa.
Gypsophila achọtala ngwa ngwa ọ bụghị naanị na hotikoisho, kamakwa na akụ na ụba. Ihe ndi ozo n'okpuru.
Dịka osisi ọgwụ, a na-eji gypsophilia ugbu a na nkà mmụta ọgwụ. Ọ nwere antimicrobial, expectorant, mmetụta analgesic. Site na ya, dozie mmiri mmiri ma were ha maka oyi, ihe na-egbu egbu nke mucosa eriri afọ. Ihe ndi ozo maka infusions nwere ike igbutu mgbọrọgwụ, ihe odide, epupụta, okooko osisi. A na-enweta ngwa ngwa niile iji chebe saponins.
Ọ dị mkpa! Saponins dị na osisi ahụ bụ nsi. Ya mere, ọgwụgwọ ahụ kwesịrị iji nlezianya hụ usoro ọgwụgwọ, ma ọ bụ ọgbụgbọ, vomiting, na isi ọwụwa nwere ike ime.
A na-eji mgbọrọgwụ Kachima asa ákwà ajị atụrụ ma na-asa ákwà akwa ajị anụ. Ogwu nke osisi ahụ na-efe efe nke ọma ma ị nwere ike iji ncha dochie ha. O zuru ezu iji gbanye osisi ahụ kpamkpam - ya na mmiri ga-enye ọtụtụ ụfụfụ. Gypsophila nwere mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ dị otú ahụ nke na ọ nwere ike ime ka ájá ghara ịga. N'ihi nke a, a na-eji ya arụ ọrụ n'ugbo iji mee ka ala dị ike.
Nrọ gypsophila gbara alụkwaghịm dị ka osisi ornamental. A na-ejikarị emepụta ùkwù.
Mgbe osisi ahụ dị n'ala, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ikiri ya. Enwere ike ichoputa ifuru osisi ma ọ bụrụ na ọ na-etolite n'ite gị ma ọ bụ ite osisi. Mgbe ị na-eji mmiri eri mmiri ya, mmiri na-abanye na ifuru, ma ọ gbasaghị n'ime ala.
Ị ma? A na-eji Kachim mgbe ụfọdụ iji nri maka nkwadebe ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu na halva.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji gypsophila mepụta ndokwa fatịlaịza, gbanwee agba ya n'ụzọ dị mfe. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịkwadebe ejiji nri ma ọ bụ àgwà pụrụ iche maka okooko osisi, iko mmiri iko ma ọ bụ ite na mmiri.
Ghichaa mmiri na mmiri.
A na-ehichapụ osisi ifuru na otu ogo nke ogo 45, belata atọ sentimita asatọ site na ala.
A na-etinye ya ifuru na mmiri ahụ ruru mmiri maka otu ụbọchị. Iji mee ka eserese ahụ dị ngwa, anyị na-etinye ifuru na ebe ọkụ na ebe ọkụ na-ekpo ọkụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ifuru dị otutu, mgbe ahụ, a ga-egbutu mkpịsị ụkwụ ya n'ime akụkụ dị iche iche ma tinye akụkụ nke ọ bụla n'ime ite a na-eji ákwà.
Mgbe usoro ncha ahụ na-eme, saa ihe ị ga-etinye ma tinye ha n'ime ite mmiri dị ọcha.
Gypsophila na-adọta ndị na-elekọta ubi abụghị naanị na ịma mma, kama ọ dịkwa mfe nlekọta. Banyere intricacies nke mmepụta ihe ọkụkụ ga-agwa n'okpuru.
Anyị na-eche nrọ - osisi nke anụ osisi, n'ihi ya, ọ na-amụba mkpụrụ, seedlings, nkụ na grafting.
Uzo osisi gi nke di ka snow, trillium, geranium ubi, dye dyer, carpenter, agapanthus, sanguinaria, alpine aster, atsidanthera, obere scalestone na penstemon ga-emecha kpoo ya.
Ọ ga-ekwe omume ịkụ mkpụrụ n'ime ala na-emeghe na mbubata mmiri ma ọ bụ oge mgbụsị akwụkwọ. Nchịkọta mkpụrụ na-ewere ọnọdụ na September. A ghaghị ịmị mkpụrụ osisi, ma mgbe ahụ echekwara maka nchekwa.
Ka ịgha mkpụrụ, ọ dị mkpa iji dozie akwa ozuzu.
Mkpụrụ mbụ ahụ pụtara mgbe ụbọchị 10 gasịrị. N'oge a, ọ dị mkpa ka mkpa akwa ahụ, na-ahapụ 10 centimeters n'etiti seedlings.
Otu izu mgbe e mesịrị, a na-enye ụmụ okooko nri nri.
Na nbata nke mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụ mmiri, dabere na mgbe a kụrụ ihe ọkụkụ ahụ, a na-ebugharị ngwaahịa ndị na-eto eto gaa na-adịgide adịgide. N'ebe a, anyị ga-eburu n'uche na e kwesịghị inwe ihe karịrị atọ bushes kwa mita square, ebe ọ bụ na ha nwere usoro mgbọrọgwụ nke mepụtara nke ọma.
A osisi toro site na osisi ga-oge ntoju n'ime otu afọ ma ọ bụ abụọ.
Akuku osisi maka seedlings meputara n'April.
Na-akwadebe ala. Ị nwere ike ịzụta ma ọ bụ ubi. A ghaghị ịkọ ala ala na ubi ájá na wayo.
Anyị na-efesa ụwa a kwadebere na mkpụrụ ndụ rassadny. Anyị adịghị emetụ.
Na-agbanye ala ma gbasaa mkpụrụ n'elu ala. Wụsa ájá.
Na-ekpuchi drawer na iko ma ọ bụ mkpuchi mkpuchi.
N'ime ụbọchị ole na ole, ndị na-eto eto ga-amụba. A ga-akpụ akwụkwọ ndụ n'ime ụbọchị 15-20.
Mgbe ụbọchị iri na anọ gasịrị, a ghaghị ịkụzi mkpụrụ osisi, na-ahapụ ebe dị anya 15 cm n'etiti ha.
Mgbe usoro mgbọrọgwụ nke osisi ahụ jupụtara cell cellling, a na-atụgharị ifuru ahụ gaa na-adịgide adịgide (2-3 osisi kwa square mita).
Ọ dị mkpa! Mkpụrụ mmiri na-ekpo mmiri mgbe ala dries. Usoro mgbọrọgwụ ekwesịghị ịbụ nke a na-ejikarị hydrated.
Mkpụrụ osisi na-amalite na mmiri, ruo mgbe inflorescences malitere na osisi ahụ. Ha na-agbanye mgbọrọgwụ nke ọma, n'ihi ya ha chọrọ nlekọta pụrụ iche. Osisi a kụrụ n'ubi a kụrụ n'ala, na-etinye ya n'ime centimita abụọ n'ime ya.
Ka usoro usoro wee gaa ngwa ngwa, ọ dị mkpa imepụta ọnọdụ dị mma. Ọnọdụ okpomọkụ kwesịrị ịdị ihe dị ka ogo 20, na iru mmiri - elu. Maka nke a, a na-arụ ụlọ griin ma ọ bụ na-ekpuchi osisi ahụ.
Ọ dịkwa mma na n'oge a na-akụ ihe ọkụkụ, ọ dị ihe dị ka elekere iri na abụọ. Mana ìhè anyanwụ na-adaghị na nkụ, a na-eke onyinyo onyinyo n'elu ha. Tupu akuku, a ga-agwọta mkpụrụ osisi ahụ na ngwọta iji mee ka ọganihu.
Ala kachasị mma maka gypsophila bụ loamy ma ọ bụ ájá na-enwe nnukwu ọdịnaya nke wayo ma na-adị ọcha. Okooko adighi-acho ala ogwugwu. Iji nọgide na-acidity na norm, ọ dị mkpa iji mee ntụ ma ọ bụ ntụ ọka dolomite kwa afọ. Ọzọkwa, a ghaghị ịgbapụ ala.
Ọ ga-aba uru maka ị gụọ banyere ụdị ala dị, otú ị ga-esi jiri aka gị kpebie na acidity nke ala, nakwa otu esi deoxidize ala na ala gị.
N'okpuru anyanwụ na okpomọkụ, ifuru anaghị achọ nri ọzọ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ị ga - emerụ humus (ruo kilogram 10 kwa mita mita), nri ndị ịnweta.
Naanị osisi na-eto eto chọrọ nnukwu mmiri. Ndị ọzọ na-aṅụ mmiri ka ọ na-ehicha. Na oge na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ọ dịkwa gị mkpa iweli ọnụ mmiri nke a wụsara n'okpuru mgbọrọgwụ osisi ahụ. Isi ihe - ekwela ka mmirilogging. Kachim na-etolite na mpaghara ogba aghara, ya mere enwekwuo iru mmiri abaghi ​​uru ya.
Na ịtọ ala, ọ dịghị mkpa. Mgbọrọgwụ siri ike nke osisi ahụ agaghị ekwe ka ahihia na-eto eto nso. Ọ dị naanị mkpa maka ịkwado maka oyi. A na-eji nke a, nwa ehi ma ọ bụ peat.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ ihe mere ị ji chọọ ala mulching.
Gypsophila na-ezo aka n'ụdị na-eguzogide ntu oyi. Ma ịkwadebe maka oge oyi na-achọ ka dị mkpa. Mgbe osisi ahụ gbawara, belata shrub na elu nke ọtụtụ centimeters site na mgbọrọgwụ. Na-ekpuchi osisi na-acha akwụkwọ ndụ ma ọ bụ alaka osisi.
Ọ dị mkpa! Osisi ogwu nke ohia kwesiri ikpo, ya mere emela ka osisi ghara iju ubochi ahu.
Osisi na-awakpo ndị dị otú ahụ mushrooms:
Rhizoctoni ọdịdị. Ha na-apụta dị ka mmiri na-agbagharị na osisi na-eru nso n'elu ala.
Mkpanaka Pythium. Na-akpata nsị mgbọrọgwụ ọbụna n'oge akọrọ.
Sclerotinia. Na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha ọcha na-egosipụta na n'ime imewe.
Genus alternaria. Na oge opupu ihe ubi na mgbụsị akwụkwọ, osisi ahụ na-acha aja aja na agba n'ihi ha.
Na genus oidium. E gosipụtara site na ntụ ntụ.
Ịkwesịrị ịlụ ọgụ mushrooms na enyemaka nke fungicides ("Topaz", "Gamair", "Fundazol"). A na-eme ka ihe ngwọta ha ṅụọ mmiri na ohia mgbe ọrịa ahụ gosipụtara. Maka prophylaxis, mee otu ihe ahụ. Dịka ọmụmaatụ, a na-atụgharịrị "Gamair" na obere mmiri ma emesị mee ka ngwọta ahụ dị elu.
Ị ga - ewere 2 mbadamba kwa 10 lita mmiri kwa mita 10 nke ebe a na - akọ. Uche a dị mma maka ogbugba mmiri. Ịgba ahụ chọrọ ihe ngwọta nke mbadamba abụọ, diluted na liter mmiri. Ọ bụrụ na egbochie ọgwụ na nje bacteria, a na-egbochi dose ahụ.
Ụlọ ahụhụ na-awakpo ohia:
Ngwuputa ala. Ọ na-akụpụta tunnels na ị ga na oghere n'ime akwụkwọ.
Spodoptera littoralis (irighiri akwukwo akwukwo Afrika). Ya larvae ebibi nwa ehi na ị ga.
A na-ejide ọgwụ nchịkwa na mgbochi site n'enyemaka nke ndị na-egbu egbu na ọgwụ na-egbu egbu ("Rogor-S", "Bi-58"). Usoro usoro "Rogorom" n'oge na-eto eto. Ọ gbara alụkwaghịm na ọnụego 0,5-0.9 l / ha, na-emefu ọgwụgwọ abụọ kwa oge.
Dịka ị pụrụ ịhụ, gypsophila bụ osisi mara ezigbo mma na nke siri ike. Ọ ga-eme ka ubi ubi gị dị jụụ, a na-eji ha mma ma ọ bụrụ na ọ dị mma, ma n'otu oge ahụ, ọ ga-abara gị uru, na-enyere aka iwusi ala n'ala ubi.